Jen Andry Rakotondrazaka : Voatendry ho kaomandin’ny CIRGN Antananarivo
Maro ireo fanendrena nivoaka nandritra ny filankevitry ny minisitra, izay notontosaina ny faha-11 ny volana aprily 2018, ary ny teo anivon’ny sekretera jeneraly miadidy ny zandarimaria no maro tamin’izany. Jeneraly miisa valo ohatra no notendrena …Tohiny
Fomba amam-panao : Tsy kolontsaina malagasy ny fandoroana razana
Amin’ny ankapobeny, ny finoana malagasy dia mametraka fa mitohy hatrany ny fifandraisana eo amin’ny olona efa maty sy ny mbola velona miriaria ety ambonin’ny tany. Antony iray hanatanterahana ny famadihana, rehefa misy ireo taranaka na …Tohiny
Mba hahafahana miaro hatrany ny tontolo iainana sy hanatsarana ny fari-piainan’ny olona, dia hisy ny fanamafisana orina ny fitantanana ny faritra arovana eto Madagasikara sy ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary. Isan’ny tanjon’ny Fanjakana malagasy …Tohiny
Ady amin’ny trafikana sokatra : Hohamafisina ny paikady napetraky ny fanjakana
Nisesisesy tao ho ao ny fahatrarana sokatra, izay nokasaina hamidy teto an-drenivohitra sy haondrana any ivelany. Nisy noho izany ny fepetra noraisina amin’ny alalan’ny fanamafisana sy ny fanatsarana ny paikady efa napetraka teo aloha, amin’izay …Tohiny
Tratra tao anatin’ny sambo (botry) mitondra ny anarana hoe ROSMY ny bolabolana andramena miisa 22 ny zoma faha 30 ny volana jona 2017 lasa teo teny amin’ny sisin-dranomasin’ny Mananara Avaratra. Efa nisy ny fampitam-baovao izay ...Tohiny